Aqoonsiga qaxootiga iyo baasaboorka dalka hooyo | Somaliska
Aqoonsiga qaxootiga iyo baasaboorka dalka hooyo
Nin Ciraaqi ah ayaa aqoonsigii qaxootinimada Sweden lagala noqday ka dib markii uu u safray dalkiisii oo uu goostay baasaboor Ciraaqi ah. Maxkamada ugu sareysa Sweden ee socdaalka (Migrationsöverdomstolen) ayaa go’aamisay in ninkaan markii uu qaatay baasaboorka dalkiisii uusan u baahneyn in magangalyo la siiyo.
Ninkaan ayaa ku dooday in uu baasaboorka Ciraaq u qaatay in uu ku galo Iran si uu uga soo guursado isla markaana isaga laftiisa uusan tagine qof kale u soo qaaday baasaboorka. Sidoo kale waxa uu ku dooday in Iran aysan aqbalin baasaboorka Främlingspass ee Sweden ay bixiso.
Maxkamada sare ayaa hadalkiisa waxba kama jiraan ka soo qaaday iyagoo sheegay in qofku haddii uu qaato baasaboor dalkiisa ah uu qaatay magangalyada dalkiisa. Hadaba ninkaas ayaa lagala noqday aqoonsigii qaxootinimada.
Waloow xaalada Soomaaliya ay hada ka duwan tahay mida Ciraaq ayaan hadana la hubin in sharcigaan uu qabanayo Soomaalida haysata sharciga degenaanshaha Sweden.
Norway oo Soomaalida qasab ku celinaysa
Cunsuriyiinta oo doonaya in ay soo galootiga ku celiyaan dalkoodii
June 22, 2011 at 20:09
Asc jimcaale ugaas waxaan kuweydiihaa ninkaan sweden maka bixin miyaa oo passporka waaloosoojaray oo boosto ayaa loosoo dhigay saas ayaan fahmay ee noo faah faahi ugaas
June 22, 2011 at 21:19
Sida ku cad go’aanka maxkamada waa uu ka baxay wadanka oo waxa uu baasaboorka ka sameystay Ciraaq.
soomaali girl says:
July 4, 2011 at 09:33
miskiin awalba anaga baasabooryo dawlad midna manan haysan
waxaan la yaabay swedishkaan qofkii wadan leh ee haysta baasaboor wadankiisa ah waxaa la leeyahay waa kaa ceshanay magan galyadii soomaali oo maskiin ahna oo baasaboor iyo dowlad laheyna waxaa la leeyahay baasaboor keensada war qaxootiga u naxariista wadamadoodana ale nabad ha uga dhigo ilmihiina mujaacaa leysay jimcaaloow wax noo sheeg naga farxiyo oo dhowr habeen ku seexano